Vernee Thor Plus သုံးသပ်ချက်။ Androidsis
Vernee Thor Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်
Francisco Ruiz | | Android ထုတ်ကုန်များ, reviews
လွန်ခဲ့သောအချိန်အနည်းငယ်က Vernee ကုမ္ပဏီငယ်သည်အနည်းဆုံးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည် Vernee thorတစ်ဆိပ်ကမ်းက ငါ Androidsis အပေါ်ဒီမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဂုဏ်အသရေရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ပါးစပ်ကအရမ်းအရသာရှိတယ်။ Vernee Thor သည်ခေတ်မတိုင်မီက terminal တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ခေတ်မတိုင်မီကတရုတ်နိူင်ငံခြားထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ခေတ်သစ်သို့မဟုတ်စင်မြင့်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်ရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်၊ ဘက်ထရီများကိုဘက်မလိုက်ဘဲပြောဆိုသည့်အတိုင်းစတင်ထည့်သွင်းလိုက်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အားအရည်အသွေးပြည့်ဝစွာပေးသောဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဥရောပစျေးကွက်တွင်တွေ့ရသည့်အရာများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ဤအခါသမယတွင် Vernee Thor ၏သားစဉ်မြေးဆက်ကိုပွင့်လင်းသောလက်ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ငယ်ရွယ်သောကုမ္ပဏီမှတင်ပြသည်။ Vernee Thor Plus အားအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းထက်ယူရို ၁၂၂.၆၃ ထက်ပိုသာသော်လည်း၊ Androidsis စာဖတ်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည် ယူရို ၁၁၀ သာရနိုင်သည် အထူးနှုန်းများ code ကိုသုံးနိုင်သည် DSVNTPL ဒီစာမျက်နှာမှာ။ ယခု Vernee Thor Plus အသစ်သည်တရုတ်နိုင်ငံမှ Android ထုတ်ကုန်များလောကတွင်ပြောင်းလဲမှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သလားသို့မဟုတ်ဥရောပစျေးကွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရေလွှမ်းနေသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏နောက်ကွယ်တွင်ခြေလှမ်းတလှည့်ဖြစ်သွားမည်လား။ ဒီမှာရှိတဲ့အဖြေ Vernee Thor Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်.
1 Vernee Thor Plus နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 တစ်ပတ်အကြာတွင်အထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုပြီးနောက် Vernee Thor Plus ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
2.2 5.5 "AMOLED မျက်နှာပြင်
2.3 add-ons များသို့မဟုတ်အပို application များမပါဘဲ Android Nougat
2.5 Vernee Thor Plus ကင်မရာများ
Vernee Thor Plus နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပုံစံ Thor Plus အား
operating system စိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိဘဲ Android 7.0
ဖန်သားပြင် ၅.၅ လက်မအရွယ် HD resolution ဖြင့် 5.5 x 720 pixels နှင့် Gorilla Glass 1280 ကာကွယ်မှုဖြင့် 300 dpi ရှိသည်
Processor ကို Mediatek MT6753 64-bit Octa Core 1.3 Ghz
GPU ကို 720 Hz OpenGL ES 53 ရှိ Mali T3.1
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32 Gb အခမဲ့ဖြစ်သည်။ 24.64 Gb - သိုလှောင်မှုပမာဏ 128 GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် MicroSd ကိုထောက်ပံ့သည်
နောက်ကင်မရာ 13 Mpx 4864 x ကို 2736 p ။ Focal aperture 2.0 LED flash - ဗွီဒီယိုတည်ငြိမ်မှု - Autofocus - HD အပြည့် 1920 x 1080p ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
ရှေ့ကင်မရာ 8 Mpx 3840 x 1088 focal aperture 2.8 နှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော 640 x 480 p ။
ဆက်သွယ်မှု Dual Nano SIM သို့မဟုတ် 1 Nano SIM + 1 MicroSD - 2G GSM: 2/5/8 3G WCDMA: 1/8 4G FDD-LTE: 1/3/7/20 - Bluetooth 4.0 - GPS နှင့် aGPS GLONASS - Wifi 2.4 /5Ghz - OTG - OTA - FM ရေဒီယို
အခြားအင်္ဂါရပ်များ အရည်အသွေးမြင့်မားသောသတ္တုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည် - ပင်မခလုတ်မှလက်ဗွေရာစာဖတ်သူ - ခလုတ်များကိုပြုပြင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်း - လှုပ်ရှားမှုအမူအယာများ - Intelligent Assist - အခြေအနေဘားကို configure လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများ - Dura အမြန်နှုန်းနှင့်အစွန်းရောက်ဘက်ထရီချွေတာသည့်စနစ်သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ရန်သီးသန့်ခလုတ်။ ။
ရှုထောင့် 151 73 7.6 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 166 ဂရမ်
စြေး € 110.03 ကုဒ် DSVNTPL ကိုအသုံးပြု
တစ်ပတ်အကြာတွင်အထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုပြီးနောက် Vernee Thor Plus ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
Vernee Thor Plus တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်သေချာသည် သတ္တုနှင့်ပလတ်စတစ်တို့ကိုစုံလင်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ပေးသောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ကြော့ရှင်းသည့်အချောသတ်.
အကွောငျး Terminal ကိုလက်ဖြင့်အလဟ make ဖြစ်စေရန်နှင့်နေ့စဉ်သုံးအသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအချောသတ်ခြင်းတစ်လက်တည်းအသုံးပြုရန်ပင်။
5.5 "AMOLED မျက်နှာပြင်
ဤ Vernee Thor Plus နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းဖြစ်သည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် HD AMOLED မျက်နှာပြင်FullHD resolution မရှိပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာနိုင်ခဲ့သည့်ပျှမ်းမျှ terminal များထက်အရည်အသွေးကိုပေးသည်။
စဉ် လူဖြူအနည်းငယ်အဝါရောင်လေ့ရှိပါတယ်high-end devices များ၏ AMOLED နည်းပညာနှင့်အတူဖန်သားပြင်များတွင်နောက်တဖန်မဖြစ်ပျက်သော, ငါတို့နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အလယ်အလတ်အကွာအဝေး terminal ကိုရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုသတိရဖို့လိုသည်။
add-ons များသို့မဟုတ်အပို application များမပါဘဲ Android Nougat
ဒါကကျွန်တော်တို့မှာဗားရှင်းရှိလို့ကောင်းတာပေါ့ မည်သည့်အပလီကေးရှင်းမှတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ Android 7.0 Nougat အသုံးမ ၀ င်သော Launchers ကဲ့သို့သော add-ons သည်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အစားအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။
Vernee Thor Plus ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းစျေးနှုန်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတွင်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်သောဆိပ်ကမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်အမှန်တရားမှာ terminal သည်အတော်လေးကောင်းမွန်စွာတုံ့ပြန်မှုရှိပြီး၊ ဖြစ် အမှန်တရားကအနည်းငယ်နှေးကွေးသည်ဟုခံစားရသည် အထူးသဖြင့် back ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါသို့မဟုတ် Android multitasking ကိုမကြာသေးမီက application များအကြားပြောင်းလဲသောအခါ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအလျင်အမြန်နှောင့်ယှက်စေသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှုလိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှစတင်သည်။ Vernee Thor Plus ကငါ့ကိုအတော်လေးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး.
ဒီအားဖြင့်ငါကမဟုတျပါဘူးဆိုလိုဘူး ပျမ်းမျှ Android အသုံးပြုသူအတွက်ထိရောက်နှင့်လုံလောက်သော terminal ကို လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များနှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application များမှတဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောဂိမ်းများကိုမတော်တဆကစားခြင်းစသည့်ကောင်းသော terminal ကိုလိုလားသည်။
Vernee Thor Plus ကင်မရာများ
Vernee Thor Plus ၏ကင်မရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချို့ရှိသည် Terminal မှရွေ့လျားနေသောစျေးနှုန်းအကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိရန်အတွက်လျောက်ပတ်သောကင်မရာများ, ကောင်းသောအလင်းအခြေအနေများတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌လျောက်ပတ်သောရလဒ်များကိုထက်ပိုမိုပေးလိမ့်မည်ဟု 13 megapixel နောက်ကင်မရာနှင့်အတူ။
FullHD resolution ဖြင့် 1920 x 1080p ဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောဗီဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားaလျောက်ပတ်သောဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းထက်ပိုသော၊ ကောင်းသောအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်အမြဲတမ်းပြောနေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းများမပြုလုပ်သရွေ့အမြဲတမ်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည် အခြေအနေများတွင်ဗွီဒီယိုတည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းကိုသင်သတိပြုမိသည့် အချိန်မှစ၍ ဖြစ်သည်။
အကယ်လို့သူ့ရှေ့ကင်မရာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်၊ Terminal ၏အကြီးမားဆုံးသောချို့ယွင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည့်နေရာတွင်ဤအချက်သည်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါနှင့် 8 megapixel ကင်မရာဖြင့်ပင်၎င်း၏ focal aperture 2.8 သည်အလင်းနှင့်ကောင်းသောအခြေအနေများရှိသည့်တိုင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအလွန်မှောင်မိုက်စွာထွက်ပေါ်လာစေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှေ့ကင်မရာတစ်ခုရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်အနည်းငယ်သာကူညီလိမ့်မည်။ အသင့်အတင့်လျောက်ပတ်သောလျောက်ပတ်သောဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များ။
နောက်ကင်မရာနှင့်ရှေ့ကင်မရာနှစ်ခုလုံး၊ သူတို့ကအများကြီးစွန့်ခွာ, ညအချိန်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါသို့မဟုတ်အလင်းရောင်နည်းအခြေအနေများအတွက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်သည့်အခါနှစ် ဦး စလုံး၏ဆန္ဒရှိခံရဖို့အများကြီး။.
ဘက်ထရီအကြောင်းပြောရရင် Vernee Thor Plus ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုတွေ့ရတဲ့ဒီဇိုင်းဒါမှမဟုတ် terminal မျက်နှာပြင်နဲ့အတူဒါဟာသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ 6200 mAh ထက် ပို၍ နည်း၍ ဘာမျှမပါ ၀ င်သောဘက်ထရီသူတို့ကငါ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ပါပြီ တကယ်ကိုမယုံနိုင်လောက်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်.
asi Vernee Thor Plus ရဲ့ဘက်ထရီက ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနစ်အကြာမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်အမြဲတမ်းမျက်နှာပြင်အမြင့်ဆုံးအလင်းရောင်ရှိခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်းကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှုကင်းမဲ့သည့်နေရာတွင် Androidsis အတွက်ကျွန်ုပ်ပုံမှန်စမ်းသပ်သောဆိပ်ကမ်းများကြုံတွေ့ရသောဘက်ထရီအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုများသောlivingရိယာတွင်နေထိုင်သည်။
လက်ဗွေဖတ်စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်လမ်းလွှဲနှင့်အတူလမ်းလျှောက်မည်မဟုတ်ပါ Android terminal မှာကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့သမျှအဆိုးရွားဆုံးလက်ဗွေဖတ်စက်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ, ပြီးတော့ငါဆိပ်ကမ်းတွေအများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်လက်ဗွေဖတ်စက်ဟာသင့်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မယ့် terminal ကိုသင်ရှာနေတယ်ဆိုရင်နောက်မှ Android terminal ကိုသင်ဝယ်ယူရန်သင်ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်းစိတ်ရင်းမှန်နဲ့အကြံပေးလိုပါတယ် Vernee Thor Plus ၏လက်ဗွေရာသည်သင့်အားမည်မျှဆိုးဝါးသည်ကိုစိတ်ပျက်စေသည်.
Vernee Thor Plus အား
AMOLED HD မျက်နှာပြင်
RAM ကို3Gb
800 Mhz တီးဝိုင်း
6200 mAh ဘက်ထရီ
အထူးခလုတ်နှင့်အတူ Ultra ဘက်ထရီချွေတာ mode ကို
USB TypeC မပါပဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Vernee Thor Plus အားပြန်လည်သုံးသပ်
တည်ငြိမ်သော MIUI9ဗားရှင်းကိုနိုဝင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်